Naam Shabana trailer: Taapsee Pannu Iyo Akshay Kumar Oo Diyaar U Ah Iney Dilaan Ama U Geeriyodan Dalkooda India - Hablaha Media Network
Naam Shabana trailer: Taapsee Pannu Iyo Akshay Kumar Oo Diyaar U Ah Iney Dilaan Ama U Geeriyodan Dalkooda India
HMN:- Maalin kadib marku Akshay Kumar deeq lacag oo gaareyso 1.08 crore ugu deeqey qoysaska ka geeriyoden ciidamadi lagu laayey gobalka Chhattisgarh, goos gooska filimka Naam shabanna aya lasoo saarey.
Akshey aya u muuqda wakiil sir doon ah oo aan wax jixaan jax ah laheen. Waxu diyaar u yahay inuu naftiisa uhuro dalkiisa.
Filimka Naam shapana, aya Akshay kula jiran Taapsee Pannu iyo Anupam Kher door muhiim ah. Sedexdaan aya goosgooska filimka soo bandhigen Super Action iyo Sido kale Dialogue ( wadahadal) fiican. Naam Shabana aya ah qeebta kowaad ee filimka 2015 Baby.
Taapsee Pannu sideeda daqiiqo oo ey kasoo muuqatey qeebta labaad filimka Baby aya soosarayasha filimkani ku qasabtey in xidigtan ey u dhiiban qeeb dhameestiran.
Filimka ayaa Director ka ah Shivam Nair, Akshay Kumar aya doorkisa filimka Baby sii wato Ajay Singh Rajput, balse muuqaal marti ah ayuu leeyahay Waxa Sido kale qeebta laadar nimada kaso muuqan doono Prithviraj Sukumaran.
Taapsee aya doorka filimkan tababar adag soo qaadatey waxana la sheegey in xidigtan ey sheegtey mararka qaar iney qaadaneyse daawooyinka dabiiciga ah si murqo xanuunka ka soo gaarey tababarka filimka isaga daaweyso.
Prithviraj aya Sido kale sheegey “Dagaalada ka dhacayo filimka oo dhan aniga aya sabab u ah. Intaasi ayan idin la wadaagi kara.” Ayu sheegey marki wax laga weydiiye filimka.
Taapsee aya Sido kale Barteeda Twitter ka soo dhigtey “sideedaba waqtiga horumarinta filimka waxyabo badan aya isbadalo. Marka isku diyarineyso ina ka gaartid duulimadka subaxi ee Delhi. Waxaan u socda Delhi ka qeeb galka goosgooska labad ee Naam Shabana.”
Akshay ayaa Sido kale Twitter kiisa kusoo qorey “Diyaar ma utihin aragtida labaad ee goosgooska filimka Naam Shabana? Udiyaar garooba qeebta cusub ee #NaamShabana waxey soo baxeysa berito duhurki. Yaan la mooganin.”
Ayu yiri 49 jirkan.
Filimka Naam Shabana aya tiyaatarka lasaari doona bisha March 31.waxa soosare ka ah Neeraj Pandey.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska labaaad ee filimka Naam Shabaana laga soo bandhigay: